Manchester City oo dalab xoogan u diyaarineysa saxiixa xidig ka tirsan Leicester City – Gool FM
Manchester City oo dalab xoogan u diyaarineysa saxiixa xidig ka tirsan Leicester City
Dajiye December 14, 2018
(Manchester) 14 Dis 2018. Wargeysyada dalka England ayaa waxay sheegeen in Pep Guardiola uu weydiistay maamulka kooxda Manchester City, inay ka xoojiyaan booska difaaca garabka bidix suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
Daafaca bidix ee kooxda Leicester City Ben Chilwell ayaa qeyb ka ah liiska xidigaha ugu cad cad ay dooneyso kooxda Man City, waxayna saxiixiisa u diyaarinayaan qiimo dhan £ 50m in suuqa furmi doono bisha janaayo ay kula soo wareegaan.
Ben Chilwell ayaa 2 bilood kahor saxiixay heshiis cusub uu kusii joogi doono kooxda Leicester City ilaa iyo 2024, wuxuuna isbuucii mushaar ahaan u qaadan doonaa aduun dhan £ 110,000.
Laakiin tani kama hor istaagi karto kooxda Manchester City inay hesho adeega 21 jirkan, kadib suuqa furmi doono bisha Janaayo.
Ben Chilwell ayaa wuxuu si weyn kagaa bilowday xilli ciyaareedkan kooxdiisa Leicester City, isagoo hoosta ka xariiqay awoodiisa weyn ee kubada cagta.
Manchester City ayaa rajo wanaagsan ka qabtay in Benjamin Mendy uu u lahaado damaanad qaad waqti dheer si ay adeegiisa uga faa’ideysato, kadib markii ay kooxda Monaco kagala soo wareegtay aduun dhan 52 milyan ginni xili ciyaareedkii hore.
Laakiin dhibaatooyin dhaawacyo ee soo wajahay ciyaaryahanka ayaa waxay saameyn xoogan ku yeesheen kooxda, maadaama uu si toos ah u ciyaaray 16 kulan oo kaliya, taasoo Sky Blues ku qasbeysa in ay u dhaqaaqdo badalkiisa.
Kahor kulanka Manchester United, Wijnaldum oo fariin digniin ah u diray saaxiibadiis Liverpool
Manchester United oo dalab qaali u soo bandhigtay David de Gea si uu u saxiixo heshiis cusub